I-Zixi: Ukuhambisa ngokukhuselekileyo ividiyo ePhilayo, yeNqanaba losasazo ngaphezulu kwe-IP-NAB Veza Iindaba ngu-Broadcast Beat, Umsasazi osemthethweni we-NAB Show-NAB BONISA UVUKILE
ikhaya » Ukudalwa kokuqukethwe » I-Zixi: Ukukhuphela ngokukhuselekileyo ividiyo ePhilayo, yeNqanaba losasazo ngaphezulu kwe-IP
I-Zixi: Ukukhuphela ngokukhuselekileyo ividiyo ePhilayo, yeNqanaba losasazo ngaphezulu kwe-IP
Ukusuka kuTim Baldwin, iNtloko yeMveliso, iZixi
Abathengi banamhlanje bafuna umxholo ezandleni zabo. Bafuna ukutya umxholo nangaliphi na ixesha, nakwesiphi na isixhobo, ezipakishwe ngeendlela ezanelisa iimfuno zabo kwaye zisiwe kwiindawo zokunyanzelisa amaxabiso. Iinkampani zemidiya ziyaqonda ukuba kufuneka zenze ucwangciso lokuya kwiindawo ngakumbi, kwaye ukusasazwa kwe-IP yeyona ndlela ilungileyo yokufezekisa loo nto. Kodwa njengokuba abathengi behamba kule ndawo yokuhamba yedijithali, imithombo kunye nokusetyenziswa kuqala ukufumana ubunzima ngokuntsonkothileyo ngemixokelelwano yonikezo, kwaye ukhuseleko ngokuqinisekileyo lungangumba.
I-Zixi inceda abanini bomxholo kunye nabanikezeli ukuhambisa ezi zixhobo zintsha ziqhutywa ziintanethi ngokubonelela ukubonakala kunye nokuhamba ngokukhuselekileyo komxholo kulo lonke. Ngetekhnoloji yokuwina i-Emmy, i-Zixi isisiseko kwiziseko zokuhambisa ividiyo ezibonakalayo, ukunceda ababoneleli bokuqukethwe ukuthatha indawo yokudluliselwa kwevidiyo emiselweyo Sathelethi kunye nefibre ngesisombululo esiguqukayo ngakumbi, esinokubukeka, esinexabiso eliphantsi nesikhuselekileyo esenza ukuba i-intanethi isebenze ngokusasazwa kwevidiyo.
UKUSETYENZISELWA KWEZOBONELELO ZE-VIDEO YOKUGQIBELA YENKQUBO YOKUGQIBELA
Siyaqonda ukuba ukhuseleko kwishishini lokusasaza yeyona nto ixhala kakhulu, ngakumbi xa kuziwa kumxholo weprimiyamu. Xa kuziwa ekuthutheni imilambo ngaphezulu kwe-IP, ababoneleli bemxholo kufuneka babe nesisombululo apho banokuthi babeke iliso kuthutho kwaye baqinisekise ukuba imilambo ihanjiswa ngokukhuselekileyo kwisiphelo ngasinye.
Ukuvumela abasasazi ukuba bahambe ukusuka kwindawo yokuya okanye ukuya kwinqanaba okanye ukuya kwindawo yokuhambisa ukuya kwindawo ephelela ukuya esiphelweni ngaphezulu kwe-IP ngokukhuselekileyo kunye nomgangatho wokusasaza, uZixi wadala inqwelomoya elawula amafu e-ZEN Master. Nge-ZEN Master, iZixi ibonelela ngesisombululo sokujonga kwenethiwekhi kunye nolawulo oluvumela ababoneleli bemxholo banamhlanje ukukhusela ngokukhuselekileyo ukusasazwa kwevidiyo yabo ngokuzithemba ngokupheleleyo kumgangatho womxholo kunye nokusebenza. Le nkqubo yokulawulwa kwe-master enesimo esivulekileyo ivumela abathengi ukuba babone lonke uthutho lwezinto zokuhambisa ividiyo ukusuka ekufumaneni ukuya kwi-CDN, MSO, MVPD, okanye iqonga le-OTT. Ngokunikwa le mbono yokuphela kokuphela kweZEN Master, abathengi bethu banesiqinisekiso esiqhubekayo sokuba umxholo wabo wevidiyo uhanjiswa ngokuthembekileyo kwiziphelo ezizizo.
UBUGCISA BONXIBELELWANO-KWI-BHODI YOKUGQIBELA YOKUGQIBELA IZIFUNDO ZOKUPHILA
Iiprothokholi zokhuseleko ezikwiyona ndlela zibalaseleyo kweziklasi kunye nokukhuselwa okunobuchule zezinye zezona zizathu zibalulekileyo zokuba abathengi bethu kunye namaqabane bakhethe ukuthumela umyalezo wabo kusetyenziswa ungqimba lwezothutho lweZixi. Yonke idatha kwiNethiwekhi eyenzelwe iZixi ikhuselwe kusetyenziswa indlela yokhuseleko eyahlukeneyo.
Ngegalelo eliphilayo kunye nokuhanjiswa, uZixi usebenzisa iindlela ezimbini zokhuseleko ukukhusela umxholo. Indlela yokuqala kukubethelwa kwesitshixo esise-tuli usebenzisa i-AES-128 / 256 encryption. Ngale ndlela, isitshixo singeniswa kokubini ekuthumeleni nasekufumaneni isixhobo kwaye ukuba iipakethi zithintelwe ngumntu wesithathu ziya kubhalwa ngokufihlakeleyo kwaye zingathandeki - le ndlela ibonelela ngenqanaba lesiseko sokhuseleko kumjelo. Indlela yesibini yokhuseleko kunye neZixi kukusetyenziswa kokhuseleko lochwephesha lweDatha yeDrafti (DTLS) phakathi kwesixhobo sokuhambisa kunye nokufumana. I-DTLS ibonelela ngolawulo olupheleleyo lweeseshoni ukwenzela ukuba umjelo ungangqubani phakathi komthombo nendawo oya kuyo. Ukusebenzisa kwethu ubuvulindlela kwe-DTLS kuthetha ukuba ukusasaza iinkqubo zevidiyo zisebenzisa i-Zixi ukutshintshisa umxholo wokuhamba bukhoma ngaphandle kokuvumela ukubonwa, ukuphazanyiswa, okanye umyalezo wokwenza inkohliso kwaye ukhuselekile ekuhlaselweni ngumntu-kumbindi (MITM). Ukongeza ekuphembeleleni ekuphelisweni kwedatha sisebenzisa amanyathelo okhuseleko ongeziweyo kumda wenqwelomoya weZEN Master Management, ngokulawula ukufikelela kolawulo, amalungelo abasebenzisi, kunye nendlela umntu ongena nokuphuma kwinkqubo ngokwayo enomgangatho weshishini lokuNgena ngokuNye. (SSO) kunye nokungqinisisa kwe-2-factor.
I-Pirism yeyona nto ixhalabisa kakhulu kubathengi bethu xa kuziwa ekusasazeni iminyhadala yemidlalo esebenzayo ye-premium kuba abathengi bahlala bafuna indlela yokubukela ezi mahala. Ngokuqalwa kweendawo zokusasaza ezisebenza ngokwazo ezinje ngeYouTube Live, Twitch, njl. Abanini bomxholo kufuneka bakhathazeke ngabathengi "ukusasazwa okubukhoma" kweziganeko zokujonga-ukubonwa kwabafundi. I-Zixi inceda abathengi bethu ukuhambisa ngokukhuselekileyo imixholo yabo ekujongwa kuyo ngaphandle kokufumana umxholo wabo unxibelelana kwaye uvela kula maqonga.
I-Zixi ikakhulu ijongene neenkxalabo zobumenemene xa kuziwa ekuhambiseni iminyhadala yezemidlalo ukusuka kwimodeli yokubhatalwa yephrimiyamu. Umzekelo, i-UFC, umbutho wehlabathi wokudibanisa ubugcisa bemfazwe kunye nomnikezeli womsitho ophambili ngokubhatala wonke umntu emhlabeni, irenta iqonga le-Zixi ukuhambisa imicimbi ye-UFC. Ngeli xesha likhulu, inkcubeko yamaxesha ekufuneka ibonwe bukhoma, ithuba lokwenza imali liphezulu. Ngokusebenzisa iqonga leZixi kuthutho lwevidiyo bukhoma ngexesha lesithuba esiphakamileyo, abathengi bethu banokusebenzisa ukusasazwa kwe-IP ukufikelela kubabukeli abakhulu kunabo bonke, kwaye qiniseka ukuba bayazi ukuba amanqanaba aphezulu okhuseleko aqeshwayo ukukhusela umjelo wabo kunye nengeniso yabo.
Ukujongana nokuxhaphaka, ishishini kufuneka liqonde imithombo kunye neendlela zobunqila kwaye emva koko lizame ukubaphazamisa. Okwangoku, igalelo kunye nokubuyiswa komxholo wevidiyo kukhuselwe nguZixi, ngokusebenzisa iindlela ezichazwe apha ngasentla, kunye nokuhanjiswa kokugqibela komxholo wevidiyo kubabukeli kukhuselwe ukuFikelela okuMiselweyo kunye noLawulo lwamalungelo edijithali, ngoko ke isoyikiso esikhulu sobuninzi kukubanjwa kunye nokurekhodwa kwevidiyo Umxholo okwinqanaba lesixhobo sokujonga. Ukutshixiza kwezixhobo zombukeli nakwisixhobo kwifowuni yomjongi kunokubangela ukurekhoda nokusasaza umxholo. Isisombululo esinye esinokubakho kwisisongelo esinjengolu kukujonga amanzi; abanini bomxholo banokongeza i-watermark engabonakaliyo kwividiyo kwaye emva koko basebenzise inkqubo ezenzekelayo ukufumana imijelo ebukhoma kwi-intanethi kwaye bayikhuphele le watermark. Nje ukuba umxholo wevidiyo ongekho mthethweni ufumaneke, umnini mxholo unokusebenza nenkonzo yokusasaza ukucima umjelo.
I-IBC 2019: Ukuphawula amaBali amaVenkile eVisrt, iNewTek kunye ne-NDI Dibanisa - Septemba 3, 2019
IziBonelelo zokuSebenzisa inethiwekhi yeMidiya yeHlabathi yoBomi obuPhezulu beXabiso - Agasti 19, 2019
I-Zixi: Ukukhuphela ngokukhuselekileyo ividiyo ePhilayo, yeNqanaba losasazo ngaphezulu kwe-IP - Agasti 6, 2019
Injineli yokusasaza Ukusasazwa kwezobunjineli CES2017 Cobalt Encoder Igalelo Inkqubo yoLawulo UGraham Chapman uVikelelwa kuMhleli MStar OTT SoftAtHome SoftAtHome, MStar, iCES2017 TVU Networks Injini yeVidiyo	2019-08-06
Previous: Iindlela zeTekhnoloji: Ukugcina / i-MAM
next: Amaqabane e-MOG ane-LineUp kwi-SET EXPO 2019